Aza jamban�ny malety !
Miandry izay hataonareo indray izahay izao ry Jean a ! Ianareo mantsy izao no tompon�ny baolina ary efa renay fa efa maro be tokoa ianareo no vonona amin�ilay fandakana an-dry Solobe sy ekipany
noho izy ireo efa hita fa tsy mamokatra kanefa dia mbola midongizina sy variana mameno paosy noho ny tanana efa zatra mitsotra niarahany tamin-dry Dinina be. Efa manantena izahay fa tsy ho resy tosiky ny mena miraviravy indray ianareo, ka hinia hikimpy tsy hiraharaha ny efa nifanarahana manoloana drala be sy ny malety ataon’ny fianakaviamben-drabekolikoly an ! Hainareo ihany mantsy fa ny alika jamban’ny taolana ary ianareo efa ambaran’ny maro fa jamban’ny malety. Porofoy aminay manomboka eto fa mbola olona azo hitokisana ianareo. Sao mantsy ka ho tratr’ilay hoe indro ny drala hanaovana bazary amin’izao faran’ny herinandro izao, ka homena ny samy variana indray izahay amin’ny fiandohan’ny herinandro a !